QABSOO, QUBEE, DHALOOTA QUBEE, QEERROO fi DHALOOTA QAROO | QEERROO
Posted on January 20, 2019 by Qeerroo
Kebede Ch Mammo
Seenaan qorannaa taateewwan darbanii keessattuu kan dhimmoota ilmaan namaatiin walqabateeti. Seenaan mata-duree bal’aadha; seenaan taateewwan walitti hidhamanfi bal’aa qorata. Taateewwan immoo ogeessaan qortamu; mala ittiin qortamanis qabu. Bu’aan qorannoo immoo ni himama; ni barraa’a; ni seenessama. Hunduu ogeessaafi ogummaa barbaada. Ani nama ogeessa seenaa waan hin taaneef dhimma kana keessa hin seenu.
Ka’umsi koo hubannoon akka nama dhuunfaatti taateewwan saba Oromoo jaarraa 20ffaa irraa kaasee mudataa turan, haala amma akka sabaatti itti jiruufi itti bahumsa fuulduree keenyaa irratti qabu yaada muraasaan seensessuu ykn akeekuu barbaadeeni.
Dimshaashumaan kaa’uuf sabni Oromoo jaarraa 20ffaa dura seeraafi sirna tolfatee jiruufi jireenya tasgaba’aa, nagaan, bilisummaan, badhaadhinaan, jaalalaafi tokkummaan jiraachaa ture. Garuu jaarran 20ffaa Oromoof jarraa hamaa ture; diinatu waraanaan itti duule; nagaatu boorahe; jiruutu manca’e; mirgatu irraa sarbame; eenyummaa isaatu faalame, bilisummaan irraa mulqamee roorroon itti galte. Jaarraa walakkaaf akkasitti jiraate. Gaafa roorroon itti hammaatu mala malate. Falli malame immoo #QABSOO dha. Qabsoon haalaafi kallattii hedduun eegalame. Galiin qabsoo immoo mirga sarbame deebifachuu, bilisummaa irraa mulqame deebisee hunfachuu, eenyummaa gatantare cimsachuu, jiruufi jireenya jige utubachuu fi seeraafi sirna isaatiin deebisee of bulchuudha.
Erga gaafa qaanqeen fincilaa qabsiifamee dubbii, sirba, geerrarsa, dhaadannoo, gammachuufi gadda Oromoo keessatti jechi akka QABSOOtti irra dedeeb’ee ka’aa ture jira natti hinfakkaatu (kun qorannoo cimaa gara sirna afaaniitiin barbaada).
Dhuma jaarraa 20ffaa jala abdiin qabsoon Oromoo galma gahuu mul’atee ture. Haata’uutii qabsoon taasifame calaqqee bilisummaa agarsiisee deebi’ee dimimmise, garuu bu’aa tokko buuse. Innis #QUBEE dha. Qubeen Afaan Oromoo afaan dubbiirraa gara afaan barruutti gahumsaan jijjiiruun uummata keessa faca’e. Qubeen uummataa keessatti facaasamee deebisee buu’aa buuse. Bu’aan Qubee #DHALOOTA_QUBEE dha.
Dhaloonni Qubees afaan isaan, seenaa isaa baratee, eenyummaa isaa uffatee, aadaa isaa dagaagsaa fincila diddaa gabrummaa finiinse. Fincilli Dhaloota Qubees bu’aa biraa buuse. Innis jaarmayaa fi tokkummaa #QEERROO Oromooti.
Qabsoon jaarraa walakkaa oliif deemaa tures tokkummaa, naamusaa fi gootummaa Qeerroo fi Qarree Oromootiin aangoo diina harkaa mulquun haraka Oromoo galche. Aangoon furtuudha; furtuu bilisummaan dhugaa ittiin mirkanaa’u; furtuu nagaafi tasgabbiin ittiin bu’u; furtuu tarsiimoon badhaadhinaa ittiin qajeelu. Amma illee aangoon argame osoo hin ititiin raafamaa jira. Raafamni kun danqama hedduu fidullee furmaata argachuunsaa hinoolu. Abdiin nagaa, tasgabbii, bilisummaa, badhaadhinaa gabbachaa jira.
Abdiin kun hojii guddaa barbaada. Dhaloonni Qubee jarmayaafi tokkummaa Qeerrootiin qabsoo bakkatti kan galche jaarraa 21ffaa keessa. Jaarraan kun immoo jiruufi jireenya dandeettiifi ogummaa addaa gaafatu fidee jira. Jarraan 21ffaa, jaarraa addunyaalessaa (giloobaalaayizeshinii) dha; jaarraa odeeffannooti; jaarraa beekumsaafi ogummaati; jaarraa saayinsiifi teeknooloojiiti. Kun carraafi rakkoo cimmaa baatee jira. Kanaaf immoo dhaloonni of qupheessuu qaba; kunis gargaarsa qaama hundaa gaafata.
Akka kooti, jaarraa 21ffaa keessatti milkaa’uuf Dhaloonni Qubee dhaloota cimaa uumuu qaba. Dhaloonni itti aanu #DHALOOTA_QAROO (Smart Generation) akka ta’u abdiin qaba.
Waa’ee Dhaloota Qaroo yeroo biraan bal’inaan itti deebi’a.